Kunini ixesha lokuTyala amaqunube? - Amaqunube Neziqhamo
Usapho Nje Bantwana Iibhodi Zamagama
Kunini ixesha lokuTyala amaqunube?
Ukuba uyazibuza ukuba 'Kunini ixesha lokutyala amaqunube?' unethamsanqa. Akukaze kube semva kwexesha ukuba uthenge ibhasikithi exhonyiweyo kunye nezityalo zestrawberry esele zikhulile. Zixhome ezi zijikeleze ipropathi yakho kwaye wenze ngathi uzityalile. Akukaze kube lixesha lokutshala amaqunube kwindawo yokugcina izinto okanye kwisitya kwivaranda yakho yelanga. Ukuba ufuna ukutyala amaqunube akho emhlabeni, ngoku lelo libali elahlukileyo.
Elona xesha lilungileyo lokuTyala amaqunube
Elona xesha lilungileyo lokutyala amaqunube emva kokuba isisongelo seqabaka lidlulile ekuqaleni kwentwasahlobo, ngesiqhelo ngoMatshi okanye ngo-Epreli.
Imifanekiso yezityalo ezikhula ebusika
Ukukhulisa iGadi yaseBusika edliwayo
Khulisa imifuno kwizikhongozeli
Ukuze uphendule umbuzo othi, 'Kunini ixesha lokutyala amaqunube,' kufuneka wazi iinyani ezimbalwa ezibalulekileyo, ezinje:
Ithetha ntoni i-aura etyheli
Yintoni indawo yakho yokutyala?
Loluphi uhlobo lwe-sitrobheli ofuna ukulutyala?
Funda indawo yakho yokutyala kunye namaxesha afanelekileyo okutyala ngokujonga kwimephu ye-intanethi yemimandla.
Zintathu iindidi zamaqunube, kunye noluhlu olubanzi lweentlobo ezahlukeneyo zestrawberry. Nganye ineendlela ezahlukeneyo zokukhula kunye nemveliso. Ezi ndidi zintathu zezi:
Usuku olungathathi hlangothi
Kwezi zinto, uhlobo lwe-sitrobheli lukaJuni luvelisa kube kanye ngonyaka, ngamanye amaxesha malunga noJuni. Iyeka imveliso ngelinye ixesha ngeyeKhala. Amaqunube ahlala ethwala iziqhamo kabini, kube kanye ngoJuni kwaye kwakhona ngasekupheleni kwehlobo. Uhlobo olutsha losuku olungathathi hlangothi lwesityalo se-sitrobheli kufuneka luqhakaze kwaye luvelise iziqhamo kulo lonke ihlobo, ukuba imeko yemozulu ilungile, ngamanye amaxesha ukuya ku-Okthobha.
Kunini kakhulu ukutyala amaqunube
Kuba ziyaqhakaza neziqhamo kude kube ngo-Okthobha, unokutyala ngempumelelo amaqunube emini angathathi hlangothi emva kokuba abanye beyekile ukuvelisa. Ngokwenyani, kuhlala kucetyiswa ukuba unyaka wokuqala ucofe iintyatyambo. Oku kwenzelwa ukugcina izakhamzimba ebezinokuya kwimveliso yeziqhamo, ke ziya kudala inkqubo yengcambu eyomeleleyo endaweni yoko. Eli nyathelo linceda ekuqinisekiseni ukuba isivuno sonyaka olandelayo sinentabalala. Ke ukuba awunanjongo zokufumana isivuno kunyaka wokuqala, kuya kwamkeleka ukutyala naziphi na iintlobo zeerberberries ngo-Matshi, ngo-Epreli okanye ngoMeyi okanye ngoJuni. Ukutyala emhlabeni ehlotyeni kuba yingxaki ngakumbi kuba ubushushu obugqithisileyo budala uxinzelelo olukhulu kwizityalo. Iindawo zokugcina izityalo ziyeke ukuthwala izityalo ezithile emva kwemihla yazo efanelekileyo yokutyala, ke kuya kufuneka uthenge izityalo zakho nge-imeyile.
kwinkumbulo yemibongo katata
Izinketho zokuTyala emva kwexesha
Ukuba liphelile ixesha lonyaka kwaye usafuna i-strawberry yakho enencasa, kuhlala kukho indlela ejikeleze ubulumko bokutyala ngo-Matshi okanye ngo-Epreli. Ukuphinda uphinde uphinde, Nazi ezinye zeendlela ezimbalwa zokuphumelela ngakumbi ngokutyala emva kuka-Matshi okanye ngo-Epreli:
Tyala kwiibhasikiti ezixhonyiweyo okanye kwizikhongozeli, njengoko zinokususwa kubushushu behlobo obugqithisileyo xa kukho imfuneko kwaye kulula ukuzinkcenkceshela nokuzijonga.
Nciphisa naziphi na iintyatyambo kunyaka wokuqala ukuze zonke izondlo ziye ekukhuleni kwengcambu hayi kwimveliso yeziqhamo. Ngale ndlela ayinamsebenzi ukuba sele udlulile umhla wokudubula.
Tyala i-everbearing okanye usuku ngamaqunube angathathi hlangothi kuba ixesha lokuvuna lide. Usuku lwamaqunube angathathi hlangothi anokuvelisa kude kube ngu-Okthobha.
Tyala kwigreenhouse, apho unokulawula ngobume yonke imeko-bume okanye inkqubo encinci ye-eco kwigreenhouse, ukusuka emanzini ukuya kwizakhamzimba, ubushushu, umoya, izinambuzane kunye nokufuma. Oko kuthetha ukuba ungakhula phantse yonke into unyaka wonke ukuba ukhetha.
Musa ukutyala konke konke. Thenga izityalo esele zikhulile ezikhulayo ngokuxhoma iibhasikiti okanye izikhongozeli.
Izinto Zakudala Imiboniso Yesilayidi Ulutsha Iphepha Lokusebenzela Ne Iiprinta Inja Ingcaciso Malunga Facebook
Cocktails Imiboniso Yesilayidi
Amaphepha Okufaka Imibala:
Ijongeka kanjani iMusic yomlomo wesibeleko ngaphambi nasemva kokuvuthwa
Ezona zitshizi ezili-15 zeDetangler ngo-2021
I-Clever DIY Ixesha leCapsule Ideas
Broccoli Rice Casserole ukusuka Scratch
Isithende esolula i-Cheerleading Stunts
izinto zokubhalela isoka lakho
ml kwibhotile yewayini
zitya kangaphi iimfudo ezityiweyo
yenza i-roller coaster yakho kwaye uyikhwele
uyisusa njani iglu enkulu kulusu lwakho
Ukuziphatha Komntwana, Uphuculo & Ubuzali
Abafazi Ishishini Impahla